के आर्मीले लिग जिते पहिलो उपाधि हो?
के आर्मीले लिग जिते पहिलो उपाधि हो? ‘इतिहास मेटाएर मेटिँदैन’
ऋग्वेद शर्मा शुक्रबार, फागुन २, २०७६, १९:०१
काठमाडौं- ‘आर्मी अहिलेसम्म लिग च्याम्पियन भएको छैन। हामीले लिग सुरु हुँदादेखि नै एउटा लक्ष्य बनाएका थियौँ- जसरी भए पनि लिग जित्ने’ त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेको भनाइ हो यो।
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको ४३औँ संस्करणको अन्तिम खेलमा शनिबार आर्मीले मछिन्द्र क्लबविरुद्ध खेल्दैछ। दशरथ रंगशालामा दिउँसो साढे १ बजे हुने खेलले नै यो लिगको विजेता टुंगो लाग्नेछ।
मछिन्द्र क्बलले आर्मीलाई हराएमा उसको पहिलो ‘ए’ डिभिजन उपाधि हुनेछ। मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल पहिलो उपाधिको जितमा आफूहरु कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँछन्। यता आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने पनि आफूहरु पहिलो उपाधिको योजनामा रहेको नै बताउँछन्।
तर आर्मीले जितेमा पहिलो उपाधि हो या दोस्रो उपाधि हो भन्ने तर्क भिन्न ढंगले आइरहेका छन्। ‘आर्मी पहिलो उपाधिको खोजीमा’ जस्ता शैलीमा समाचार शीर्षकहरु आइरहेका छन्। खेलाडीदेखि प्रशिक्षकसम्म पहिलो उपाधिकै रटानमा छन्।
खास कुरा के हो त? एकैछिन नेपालमा लिग फुटबलको सुरुवात र सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको जन्मलाई नियालौँ,
नेपालमा फुटबल कहिलेदेखि खेल्न थालियो यकीन छैन। बिस १९७० को दशकमा नेपालमा खेलाडी जुटेर राम्ररी फुटबल खेल्न थालेको भनाइ भने सुनिन्छ। त्यसमा विशेष त भारत कोलकाता पढ्न जाने राणा शासकको देन छ।
राणाप्रधानमन्त्री जुद्धसम्सेरका नाति नरसम्सेर जबराले पनि कोलकातामा नै सिकेको फुटबल नेपालमा आएर विकास गर्न निकै काम गरेका थिए। राणा दरबारभित्र सीमित फुटबल उनैले सर्वसाधरणको पहुँचमा पुर्‍याएको विश्वास गर्ने आधारहरु पाइन्छ।
ट्रफीसाथ आर्मीका कप्तान भरत खवास र मछिन्द्रका कप्तान विराज महर्जन।
नरशम्सेरकै पहलमा बिस १९९५ मा नेपालमा पहिलो अनाधिकारिक लिग फुटबलसमेत भएको थियो। त्यो लिग पाटन टुँडिखेलमा गरिएको थियो। जहाँ अहिले सेनाको राजदल गणको ब्यारेक छ। त्यो लिगमा नरसम्सेरको सक्रियतामा जावलाखेल, भारतीय दुतावासका कर्मचारी मिश्रित ठमेल, डिल्लीबजारको महावीर क्लब, पाटन, क्रषिकेश शाहहरूको सक्रियतामा गठित इन्टर इन्टिस्च्युट लगायतका टोली समावेश रहेको लेखोटहरु पाइन्छ। तर झगडाको कारण त्यो लिग बिचमै टुंगियो। जुन झगडा राणा प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्दा लिग पुनः सुरु गर्न नसकिएको बताइन्छ।
पछि बिस २००४ सालमा नरशम्सेरकै सक्रियतामा नेपाल फुटबल संघको गठन भएपछि पद्म सम्शेरको सहमतिमा केही वर्षमा नै आधिकारिक लिगका रुपमा आयोजित राम जानकी कप सुरु भयो। त्यसलाई नेपाली फुटबल विकासको मुख्य आधार मानिन्छ।
बिस २००७ सालपछि रक्षा दल (हाल नेपाल प्रहरी) ले रामजानकी कपको पहिलो तीन वटै संस्करण जितेर शील्ड नै पचाएपछि उक्त लिग पनि संकटमा परेको थियो।
त्यो समय रक्षा बाहिनीका आइजी ज्ञानबहादुर याकथुम्बा थिए। उनकै नेतृत्वमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा रक्षा बाहिनीका खेलाडीले रामजानकी कपलाई सहिद नामाकरण गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रहरीकै सहयोगमा बनेको नयाँ ट्रफीलाई ‘सहिद स्मारक ट्रफी’ नाम दिएर नेपाल फुटबल संघलाई हस्तान्तरण गरियो। जसले बिस २०११ सालदेखि पुनः लिग सुरु भयो।
२०११ सालको लिग ट्रफी। जुन आरसिटीको संग्रहालयमा सुरक्षित छ। ट्रफीमा २०१४ सालमा सैनिक ११ ले लिग जितेको उल्लेख छ।
नेपाल फुटबल संघ अस्तित्वमा रहेसम्म लिगको आयोजना १५ पटक भएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भएपछि २०३२ यता अहिले जारी लिगसमेत २८ वटा लिग भएको छ। संरचना र अन्य सबै कुरा एउटै नै रहँदा २०११ सालदेखि नै अहिलेसम्म एउटै लिग निरन्तर हो भन्नैपर्ने हुन्छ। समय समयमा बीचका केही वर्ष लिग नभए पनि अहिले ४३औँ लिग चलिरहेको छ।
२०११ सालमा महावीर ११ क्लब, २०१२ र २०१३ मा नेपाल पुलिसले लिग जितेपछि २०१४ सालमा सैनिक ११ टिमले लिग जितेको थियो। जुन अहिलेको स्वरुपमा हेर्दा आर्मी क्लबकै रुपमा निरन्तर हो।
२०१७ र २०१९ सालमा एनआरटी, २०२० मा विद्या व्यायाम, २०२३ मा महावीर ११, २०२४ मा फ्रेन्ड्स युनियन, २०२५ मा देउराली क्लब ठमेल, २०२६ मा महावीर ११ र २०२७ मा पुनः देउराली क्लब ठमेलले नै लिग उपाधि जित्यो। त्यसपछि भने २०२८, २०२९ र २०३० मा रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसिटी) ले लिग जित्दै ट्रफी आफ्नो बनाएको थियो।
नेपाल पुलिस क्लबले पछिल्लो पटक २०६८ सालमा लिग उपाधि जित्दा २०६७ र २०६३ सँगै २०१२ र २०१३ समेतको उपाधि गणना गर्दै पाँचौँ उपाधि भनियो। त्यसो भए अहिले आर्मीलाई किन पहिलो उपाधिको खोजी भनिँदैछ त?
सैनिक ११ ले लिग जितेको २०१४ सालतिर नै नेपाली फुटबलमा सक्रिय रहेका खेलाडी कोमल पाण्डे भने अहिले आर्मीले उपाधि जिते दोस्रो उपाधि नै हुने र इतिहास मेटाउने प्रयास कसैले गर्न नहुने तर्क गर्छन्।
‘आर्मीले जमानामा २०१४ सालमा लिग जितिसकेको छ। यसपटक आर्मीले पहिलो उपाधिको आशमा भन्नु त इतिहास मेटाउने गलत प्रयास हो नि। त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। एन्फा यस्तो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘लिग उही हो। ट्रफी उस्तै हो। संरचना उस्तै हो भनेदेखिन इतिहास बिर्सेर अगाडि बढ्न हुँदैन। एन्फामा नै यस्तो जानकारी छैन भने त संघ चलाउनुको के अर्थ र!’
जारी लिगमा आर्मी टिम।
आर्मीले लिग जिते पहिलो उपाधि भन्ने कि दोस्रो त? एन्फा प्रवक्ता किरण राईले ‘यो विषय यही हो भन्ने यकीन नभएको’ भन्दै छोटो जवाफ दिए।
एन्फा लिग समितिका निर्देशक सञ्जिव मिश्र भने प्रवक्ता राई भन्दा केही स्पष्ट र भिन्न रुपमा देखिए। ‘पहिलो उपाधि जित्दै भने पनि हुने र दोस्रो उपाधि भने पनि हुने’ भन्दै उनी भन्छन्- ‘यदि आर्मीले लिग जितेमा त्रिभुवन आर्मी क्बलको रुपमा पहिलो उपाधि भनिनु पनि जायज नै हो। २०१४ सालमा सैनिक ११ टिमलाई विभागीय टिमको एउटै रुपमा हेर्दा आर्मीको दोस्रो उपाधि भन्दा पनि हुन्छ।’